MYANMAR TRANSPEED COMPANY LIMITED နှင့် T6 Decor Company Limited တို့၏ (အစုရှင်များ၏ဆန္ဒအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း) နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ Annotation Yangon Co. Ltd Notice under the Myanmar Insolvency Law Final General Meeting Invitation (Members’ Voluntary Winding-up)၊
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၇) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
အမ်ဆာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MSA Public Company Limited) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ကုမ္ပဏီအား ဆန္ဒအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ရရန်ရှိသည့်အကြွေးများတောင်းခံရန် သတိပေးခြင်း၊ CG TRADING ENTERPRISE (MYANMAR) COMPANY LIMITED
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၂) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၆) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
My Play Company Limited Company Registration No. 113339675၊ Environ Myanmar Company Limited Company Registration No. 117433420 နှင့် GoGlobal Myanmar Company Limited Company Registration No. 108647264 တို့၏
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၅) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၅) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၄) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
ဇော်ဝင်းသိန်းအတတ်ပညာနှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် (ZAW WIN THEIN PROFESSIONAL SERVICES CO., LTD) ဖျက်သိမ်းရန် ကြေညာချက်၊ LION ENERGY GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED အား အပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၃) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
SUNWAY BUILDERS (MYANMAR) COMPANY LIMITED (In Members Voluntary Winding-up)၊ Notice Under Section 357, Myanmar Companies Act (2017) Rooking Myanmar, Ltd. (In Members Voluntary Winding-up) Invitation to Final Meeting၊ ဂလိုဘယ်(လ်) ကိုး ပါ့(တ်)နာ(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (GLOBAL CORE PARTNERS COMPANY LIMITED)
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၂) ပြန်တမ်းစာစောင် (e-Book)
ARTISAN CONCEPTS LIMITED မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ အစုရှယ်ယာရှင်များ ဆန္ဒအလျောက် ကုမ္ပဏီအားစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်ကြေညာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမွဏီများဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၇ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အပြီးသတ်အထွေထွေအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် အကြောင်းကြားစာ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၈) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၁) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
MIL MANAGEMENT COMPANY LIMITED (In members’ Voluntary Liquidation) Pursuant of Section 357 (A) of the Myanmar Companies Law (2017) Final Meeting
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၁၀) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
JACQSINTEX COMPANY LIMITED နှင့် NYEIN GABAR MANUFACTURING COMPANY LIMITED တို့ မြန်မာနိုင်ငံလူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၇ (က) (၂) နှင့် ပုဒ်မ ၁၅၂ (က) အရ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများက ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ MAHAR AKARIT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၄) ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၅) ၊ အမှတ် (၉) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင်ဖြန့်ချိ
METTA VENTURES LTD၊ ဂျင် ကင်း (မြန်မာ) ဆလူးရှင်း (စ်) လီမိတက် [Jing King (Myanmar) Solutions Limited] နှင့် SPLYT LIMITED တို့အား မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေနှင့် လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများအရ ကုမ္ပဏီအား ဆန္ဒအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ရရန်ရှိသည့်အကြွေးများ တောင်းခံရန်သတိပေးခြင်း၊